Xildhibaano qorsheynaya iney mooshin ka diyaariyaan R/wasaare Cabdi Weli – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Mareeg Media ayaa sheegaya iney jiraan xildhibaano qorsheynaya iney baarlamaanka geeyaan mooshin ka dhan ah R/wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Arrintaan ayaa imaaneysa kadib markii uu cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/wasaare Cabdi Weli Sheekh Axmed.
Ilaa hadda lama shaacin tirda xildhibaanada mooshinka wada, hase ahaatee waxaa socda qorshahaas, inkastoo xildhibaanada taageersan R/wasaaraha aya wadaan qorshe ay uga hortegayaan mooshinkaas.
Khilaafka madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa gudoomiyaha baarlamaanaka Soomaaliya Prof. Jawaari sheegay in lagu xallin doono qaab dastuuri ah.
Horay ayaa baarlamaanka Soomaaliya usoo gebagebeeyey khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne Xasan iyo R/wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo baaralaanku codka kalsoonida kala laabtay December, 2013.